Midowga Yurub oo Puntland ku Booriyay la Dagaalanka Argagaxisada – Radio Daljir
Midowga Yurub oo Puntland ku Booriyay la Dagaalanka Argagaxisada
Maarso 25, 2016 7:03 b 0
Garacad, 25, March, 2016-(Daljir)_Midowga Yururb ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dagaalada dhawaan ciidamada Puntland iyo Alshabaab ku dhexmaray deegaano ka tirsan Puntland.
Wakiilka EU ee Soomaaliya, Mr. Michal Caravan ayaa sheegay taasi inay muujinayso sida ciidamo Soomaaliyeed ay uga awood roonaan karaan maleeshiyada Alshabaab. Wuxuu intaa ku daray in dhiiranaantii dhawaan ay muujiyeen ciidamada Puntland ay daliil u tahay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xataa ay jebin karaan Alshabaab.
Wuxuu sheegay in xataa Jubbaland ciidamada maamulka Jubba iyo AMISOM ay ka jawaabaan weerarada Alshabaab. Wakiilka EU ee Soomaaliya, Mr. Michal ayaa sheegay in arimahaasi teegeero ka heli karaan EU.
Si kastaba ha ahaate wakiilka EU ee Soomaaliya, Mr. Michal wuxuu sheegay in Midowga Yurub uu doonayo inuu horumariyo booliska Soomaaliya.
Dhawaan ayaa waxaa Alshaab kooxo ka tirsan oo deegaanada Puntland gaaray ay kula dagaalameen ciidanka Puntland deegaano Puntland ka tirsan sida Garacad iyo togga Suuj. Puntland ayaa dawladeedu sheegtay inaysan wax kaalmo ah u baahnayn inay Alshabaab iska caabbiso.
Dhagayso R/wasaare Sharmaake: Waxaan u imid inaan ka tashanno aayaha Soomaaliya iyo kan Puntland
Dagaal-yahanno ka tirsan Al-shabaab oo isku soo Dhiibay Dowladda Puntland